International Hotel Projects - Armati Hotel Project Na Africa
Akpọ support free: + 86 136 8955 3728
Armati okomoko Hotel foset
Foset & nfiksi
ụlọ ịwụ ngwa
N'ụba Systems & ịsa ndi isi
Sanitary Dabara Adaba Ngwa
okpokoro ịwụ igbapu
Ịsa ọnụ ụzọ ngwaike
siphonokpokoro ịwụ igbapuịsa n'efukọmputa foset
Ị nweghị ihe gị ịzụ ahịa cart.
Armati Hotel Project Na Africa
Ị nweghị ihe na-atụnyere.
Foset & eletrik
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Ahmedabad
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Bengaluru
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Chennai
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Delhi
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Dhaka
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Georgia
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Hong Kong
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Hyderabad
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Jakarta
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Karachi
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Kolkata
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka kuala lumpur
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Lahore
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Manila
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Mumbai
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Nagoya
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Seoul
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Singapore
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Tehran
Ụlọ ịwụ faucets emeputa soplaya N'ogbe maka Tokyo
Ele All Tags
Ihe na	News By
Friday, February 12, 2016 9: 16: 27 AM America / Los_Angeles
Otu n'ime Armati 5 amalite hotel oru ngo na South Africa, Africa,-nnọọ ka gaa na nke a hotel ịhụ anyị foset.
Armati 413 usoro foset catalouge biko na-esonụ:
Nke a Johannesburg hotel ọnọdụ na Sandton, na obodo upscale azụmahịa district, dị nnọọ mkpụmkpụ Gautrain Station na nkeji n'ebe nkiri dị ka Nelson Mandela Square. Ọbịa na-enwe mfe nnweta OR Tambo International Airport, nke bụ naanị 30 kilomita site na họtel. Họrọ si 290 ụlọ na eji enyere ndụ aka dị ka Free elu-ọsọ, wireless Internet maka ọbịa bi na nkwari akụ, ma ọ bụ na-ahọrọ a nkecha chọrọ ịgụ maka akp anọ. Ọbịa anọ na Business Klas ụlọ, oke ime ụlọ na penthouses-enwe ohere na Business Class ezumike. Ekiri ka chefs kwadebe oge a Italian nri na-emeghe ụlọ ekwu na Vivace. The anyanwụ oche na n'èzí ọdọ mmiri na 8th n'ala, a-atụrụ ndụ spa na njikere nke ọma Planet Fitness Platinum mgbatị ekwe nkwa otutu ohere iji tụsaratụ. Nke a Johannesburg hotel si ọrụ na-agụnye ala ụgbọ ala na-adọba ụgbọala. Omume ụsụụ ndị agha nwere ike doputa a 90-seater n'ụlọ mgbakọ ma ọ bụ otu n'ime 15 njikere nke ọma nzukọ ụlọ maka azụmahịa na nnọkọ ntụrụndụ.
Africa hotel ụlọ ịwụ oru ngo
Armati ụlọ ịwụ ngwaike, na-eduga emeputa nke elu-ọkwa ịdị ọcha ike na Asia-Pacific Region. Anyị nwere ụlọ ịwụ foset ngwaike mmepụta osisi na Southern China Jiangmen obodo (Heshan) .Anyị nwekwara enwetara a German n'ichepụta osisi.
ụlọ ịwụ Blog
Product Ndepụta ngwaahịa
Showroom: Top Living, 3069 ndịda Caitian Road, Futian District, Shenzhen City, China. + 86-755-33572875
Copyright © 2004-2016 Armati Bath Hardware Ikike niile echekwabara
AF SQ AM AR HY AZ EU BE BN BS AF SQ AM AR HY AZ EU BE BN BS CA CEB NY zh-CN zh-TW CO HR CS DA NL EO ET TL FI FR FY GL KA DE EL GU HT HA Haw IW HI HMN HU IS IG ID GA IT JA JW KN KK KM KO KU KY LO LA LV LT LB MK MG MS ML MT MI MR MN MY NE OBU PS FA PL PT PA RO RU SM GD SR ST SN SD SI SK SL SO ES SU SW SV TG TA TE TH TR UK UR UZ VI CY XH YI ZU elu ọgwụgwụ ụlọ ịwụ foset ụlọ ịwụ foset emeputa ịsa foset emeputa ụlọ ịwụ ngwaike emeputa elu mma ụlọ ịwụ ngwa hotel ụlọ ịwụ facuet okomoko bath nfiksi aru ugboelu usoro mmetụta foset emeputa china zoro ezo ịsa emeputa china ịsa usoro factory china bath ngwa soplaya mgbidi n'ịnyịnya tap soplaya